Mozika metaly etsy Antsahamanitra :: Ho rakotra akanjo miendrika efamira ny fampisehoan-dry Mage 4 • AoRaha
Mozika metaly etsy Antsahamanitra Ho rakotra akanjo miendrika efamira ny fampisehoan-dry Mage 4
Hisintaka amin’ny loko mahazatra ny mozika rock hatramin’izay ny lanonana hotontosain’ny tarika Mage 4, etsy Antsahamanitra, amin’ny alahady 25 aogositra 2019. Hampitovy fitafy ny mpanakanto eny an-tsehatra sy ny mpijery eny am-pitoerana amin’io fotoana io.
Akanjo miendrika efamira no lohahevitra iraisan’ny roa tonta. Manana safidy amin’izay lokon’akanjo tiany kosa ny tsirairay. “Endriky ny fifamatorana eo amin’ny tarika sy ny mpankafy io fampitoviana fitafy io. Inoana fa hiray fo aminay ry zareo”, hoy ny fanentanana nataon’ny Mage 4 tao amin’ny pejy “Facebook”-ny.
Maro ny mpanara-dia an’ity tarika ity no efa namaly ny antso sy miombon-kevitra amin’izy ireo satria efa ifanotofana sahady ny fividianana tapakila, raha ny nambaran’ny mpikarakara ny hetsika. Malalaka kosa ny safidy ho an’izay te hisalotra ny fitafy mampiavaka ny rock.
Niforona tany Toliara tamin’ny taona 1992 ny tarika Mage 4. Gadon-kira rock mavesatra sy milamina no tena nahafantaran’ny maro azy. Nampalaza ny tarika tamin’ny fotoan’androny ilay hira hoe: “Valin’ny ditra” sy “Lavitra”. Rakikira efatra no efa novokarin’ny tarika tao anatin’ny dimy amby roapolo taona nisiany. Nanomboka tamin’ny “Valin’ny ditra”, nandalo ny “Fiandohana”, nitohy tamin’ny “Tsiaro an’i Mika” ary ny “Fanatitra”, izay vao nivoaka tamin’ny taon-dasa.
Nandalo fotoan-tsarotra sy sedra maro izy ireo nandritra izany rehetra izany. Anisan’ny voina nianjady tamin’ny Mage 4 ny nahafatesan’i Mika, mpitendry gitara fototra tao amin’ny tarika, vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny 11 septambra 2011. Hatramin’ny fotoana niorenany no efa niovaova ireo mpikambana tao anatin’ny tarika. I Lita, Elysé, Gégé, Tins, Ken, Biback, Titan ary Teddy no mandrafitra azy, amin’izao fotoana izao. Izy valo mirahalahy ireo no hiaktra etsy Antsahamanitra.
Mozika metaly :: Hiverina hiaraka hanafana lampihazo i Kazar sy Martz